Warbixin ku saabsan Golaha Wasiirada uu magacaabay Madaxweynaha Puntland | Get Latest News From Horn of Africa |
Warbixin ku saabsan Golaha Wasiirada uu magacaabay Madaxweynaha Puntland
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Maxamed (Deni) ayaa soo dhisey xukuumaddii la shaqeyn lahayd shanta sano ee soo socota, Madaxweynaha oo la doortey 8 janaayo ayaan ku soo dhisin muddo 21 cisho ah ee dastuuriga ahayd in xukuumadda lagu dhiso, waxaana Baarlamaanku u sameeyey muddo kordhin 14 maalmood ah oo ku eg isniinta.
Xukuumadda uu soo dhisey Mudane Deni ayaa ka kooban 18 Wasiir 21 Wasiir ku xigeen iyo 9 Wasiiru Dowle, kuwaas oo u badan wasiiro cusub oo aan kamid ahayn xukuumaddii hore.
Golaha Wasiirada ee Madaxweyne Deni waxaa kamid ah dhalinyaro badan, aqoonyahan isugu jira kuwa dalka joogey iyo kuwo qurabaha ka yimid labadaba.
Haweenka iyo Xukuumadda Deni
Haweenka oo markii hore Golaha Wakiilada kulahaa hal Xildhibaan oo keliya halka Baarlamaankii u horeeyey ay kulahaayeen 5 Xildhibaan ayey muuqataa in xukuumaddan ay ku yaryihiin, waxaana ay ka heleen hal wasiir iyo labo wasiir ku xigeen, Madaxweynaha oo horey waraysi u bixiyey ayaa sheegay in haweenku xukuumadiisa ku lahaan doonaan tiro macquul ah oo ay ku qanci doonaan, lama oga ay in haweenku tiradan macquul u arki doonaan.
Wasaaradda Tamarta, Macdanta iyo Biyaha
Wasaaraddan ayaa ah mid cusub, waxaana meesha laga saarey Wasaaraddii beeraha, wasaaraddan ayaa la aamisn yahay in la isugu keenay hay’addii Macdanta iyo Hay’adda weyn ee PASWEYN oo haysata mashaariic aad u badan oo gaareysa malaayiin dollar. Hay’dda PASWEYN ayaa ahayd markii hore mid si gaar ah loo dhisey waxaana ka danbeeyey rabbi ha u naxariistee Agaasimihii hore ee hay’addii tamarta iyo korontada ee Soomaaliya Col. Abshir Muuse Siciid.
Dhanka tirada xukuumadda Deni ayaa noqoneysa Xukuumaddii ugu badneyd ee lagu dhawaaqo bilowga Doorashada kadib, haddii aan u bar-bardhigno Xukuumaddihii janaayo 2009 iyo Janaayo 2014 waxaa badan Xukuumadda Deni ku dhawaaqey. Madaxweyne Faroole ayaa 17 janaayo 2009 ku dhawaaqey tiro Wasiiro ah oo gaaraya 38 Wasiir, laakiin waxa uu gadaal ka gaarsiiyey Xukuumadiisi 54 Wasiir wadarta guud. Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas ayaa isaguna ku bilaabey 47 Wasiir bilowgii Xukuumadiisa, laakiin waxa uu gadaal ka gaarsiiyey 57 Wasiir, xukuumadihii ka horeeyey kuwaas dhamaantood waa ka yaraayeen 36 wasiir.
Madaxweyne Deni ayaa ku dhawaaqey 48 Wasiir, lama oga in uu gadaal ka magacaabi doono wasiiro kale marka cadaadiska beeluhu bataan, laakiin tirada uu ku bilaabey albaabkana ku furay ayaa ka badan kuwii hore. Doorashadii 8 Janaayo kadib waxaa si weyn loo saadaalinaayey in xukuumadda guud ahaan ayba ka yaraan doonto 36 wasiir taasna ma dhicin.
Asaaskii Puntland ayaa lagu dhisey 9 wasiir oo keliya, kadib qalalaasihii iyo dagaaladii ka dhacay Puntland 2001-2002 xukuumaddii u horeysey ee Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf ku dhiso Boosaaso ayuu gaarsiiyey 13 Wasiir, kadib heshiiskii dhexmarey Gen. Cadde Muuse Xirsi iyo Cabdullaahi Yusuf 2003 ayaa tiradu gaartey 18 Wasiir, taas oo marba marka ka danbeysey kor u kacaysey, ayaa Xukuumaddii Cabdiweli Cali Gaas ka tegey ahayd tii ugu badneyd ee abid Puntland soo marta.
Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa laga sugayaa in uu Baarlamaanka horgeeyo xukuumadiisa cusub iyo barnaamijka shanta sano dalka lagu hagaayo si ay u helaan kalsooni. Golaha Wakiilada ayaa isla maanta isku raacay in Xukuumadda iyo barnaamijkooda duuduub loo ansixiyo halka kalfadhigoodi hore ay si weyn uga doodeen in mid mid golaha wasiirada loo ansixiyo. Golaha Wasiirada ee cusub ayaa Golaha wakiilada hortooda ka akhrin doona taariikhda noloshooda ee shaqo iyo waxbarasho, halka Madaxweynuhu jeedin doono Barnaamijkiisa.
Inkasta oo xukuumaddu aysan noqon mid kooban oo ay ku dhawdahay 50 Wasiir ayaa shacabku uga fadhiyaan in ay gutaan waajibaadkooda shaqo, gaarsiiyaan bulshada adeega ay filanayaan, amniga sugan iyo horukac dhaqaal